Shalay waad taageertay, maantana waad ka horjeeddaa: Fadlan, na qanci. Qaybtii 3aad Qoraa Maxed Baashe X. Xasan | CeelGardi News
Shalay waad taageertay, maantana waad ka horjeeddaa: Fadlan, na qanci. Qaybtii 3aad Qoraa Maxed Baashe X. Xasan
February 1, 2019 - Written by admin
Shalay waad taageertay, maantana waad ka horjeeddaa: Fadlan, na qanci.
“Maxaan dogob beer is idhi
Daruuro u soo sasabay
Biyuhu uga sii dareen!”
Muuse waa la doortay. Talooyin badan waa uu xambaarsanaa. Waxa ugu cuslaa barnaamijkii siyaasiga ahaa iyo ballanqaadyadii la xidhiidhey ee aannu kala shaqaynay. Waxa aan ka mid ahaa dadkii aqoonsanaa haddii uu Muuse soo baxo oo uu raaco barnaamijkaas siyaasadeed iyo qorshaha hawl-galladiisa ama fulineed ee la socdey waxa ay hoggaamintiisu Somaliland ka tallaabin doontaa is goysyadii halista badnaa ee ay taagnayd.
Muuse waxa uu dadkii barnaamijka wadey la qaatay, in kasta oo barnaamij kalena meelo kale dad kale ka wadeen, haddana kaayagii in uu ku socdo barnaamijkaas iyo qorshaha fulintiisa, iyo diyaarinta dadkii u qalmi lahaa ee ka midho-dhalin kari lahaa oo lagu soo xusho aqoon takhasus leh iyo waaya-aragnimo la hubiyey, karti iyo hufnaan la bilkeedey, iyo dadnimo iyo daacadnimo la shirrabay.
Somaliland oo ku dhaqanta nidaam mucbeel ama mutaweled ah oo isugu dhafan hab-dawladeed qabali ah iyo mid casri ah (Hybrid) waxa suurta gal ahayd dadka loo baahan yahay in laga heli karayey qabiil kasta oo labeentiisa laga soo xulan karayo.
Caqabaadka ugu waaweyn ee Somaliland horyaalley, barnaamijka siyaasadda iyo qorshahiisa fulintuna ka soo dabqaadanayeen waxa ka mid ahaa, uguna muhiimsanaa, illayn haani gun bay ka tolantaaye:
Midnimada iyo wadajirka Somaliland oo sii diciifayey intii Kulmiye talada hayey.
Lahaanshaha bulsheed (social belongings), ahaansha (Identity) iyo xukunku (authority/govern) si ay isu daboolaan, isuna qabtaan waa in la qaadaa markiiba tallaabooyinkan oo soo noolayn kara dhayidda iyo xoojinta wadajirka bulshada ayaa qorshuhu ahaa sida:
• Dhiirrigelinta iyo ilaalinta xuquuqda qofka ee muwaaddinnimo/geyiilennimo. (Noolaynta ku daadashada ummadnimo iyo qarannimo qof qof iyo bulsho ahaanba).
• Madaxtooyadu waa in ay noqotaa meel ay iska wada dhex arkaan bulshada kala duwani oo ay wada lahaanshe ka dareemaan meel iyo xafiis kasta oo ay adeeg uga baahdaan.
• In dib loogu noqdo saami-qaybsiga kuraasta aqalka wakiillada.
• In dib loo jeedaaliyo distoorka qaranka si wax-ka-beddelka loo baahan yahay loogu samayn karo.
• Golaha guurtida- In dib loo eego tirada iyo saami-qaybsiga kuraasta iyo habraaca xulashada.
• In la iska jiro cudurka weynaynta magaalo-madaxda, iyada oo hay’adaha waaweyn ee qaranka loo kala qaybinayo gobollada waddanka. (maamul daadejin)
• In culays la saaro daah-furnaanta iyo xakamaynta musuqmaasuqa, eexda, qaraabokiilka iwm oo ay ku jirto caddaynta ama xaqiijinta hantida shakhsiga ah inta aan xilka loo cayimin .
• In dib loo eego xeerarka habraac ee dawladda dhexe iyo dawladaha hoose, maamul daadejinna lagu sameeyo.
• In dood laga furo isu soo dhoweynta iyo midaynta 18-ka May iyo 26-ka Juun.
Qorsheyaasha kale iyo fulintoodu waxa ay ku saabsanaayeen hagaajinta tayaynta iyo casriyaynta kaabayaasha dhaqaale, adeegyada bulsheed, amniga iyo arrimaha dibedda.
Xoogga waxa uu qorshaha hawl-galeed saarayey oo mudnaanta koowaad lahaa kor-u-qaadka iyo tayaynta dhaqaalaha (xoolaha, beeraha, kalluunka, macdanta iyo khayraadka dabiiciga ah, ganacsiga iyo maalgelinta maxallig ah iyo ta shisheeye, tayada bangiga iyo xeerarka lagu maamulayo iwm), caafimaadka, waxbarashada, xasillonida iyo xidhiidhka dibedda, arrimahaas oo lagu xaqiijin karo dhisidda xukuumad tayo leh oo yeelata maamul wanaag iyo xilkasnimo hoggaamineed sida sharciga oo cid kasta ka sarreeya, garsoor hufan iyo caddaalad, xakamaynta iyo la dagaalanka musuqa, lunsiga hantida qaranka, qaraabokiilka, eexda, sugashada degganaan siyaasadeed iwm oo ka mid ahaa waxyaalihii daashadey ee hoos u dhigay haybadda iyo milgaha dawladnimo ee xukuumadihii hore, gaar ahaan tii u dambeysey ee Kulmiye.
Sayid Xamse Xasan Cabdi, Mukhtar Maal, Dop Daud iyo inta kale ee su’aashsni u taagnayd.
Shirweynaha Shaqaalaha Wasaaradda Tamarta & Macdanta Jsl Oo Qabsoomay + SAWIRRO
Hablaha Ceelgardi oo shahaado sharaf
Daawo: Warbixin Laga Diyaariyay Horumarka Ay Samaysay Dekeda Berbera
Daawo. Barmaamijka waxqabadka sanadka dhamaadka ah 2019 Ee Xukumada Somaliland
Daawo: Ugaas Cabdiraxmaan xaaji daahir oo colaadaha xiligan ka jira somaliland ku Eedayay madaxdhaqameedka
Madaxwaynaha Jsl Oo Ku Gudajira Waajibaadka Xajaka Ayaaa U Anbabaxay Madiina
Copyright © 2020 Ceelgardi News ®All rights reserved.